Hardik Oza ny lahatsoratra momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Hardik Oza
Arakaraka ny fiovan'ny zavatra no hitovizany hatrany. Jean-Baptiste Alphonse Karr Zavatra tsara iray amin'ny media sosialy: tsy mila manao sarontava ianao. Azonao atao ny mandefa na inona na inona amin'ny fotoana rehetra na amin'ny fotoana rehetra mitranga mandritra ireo fotoana voatondron'ny COVID-19 ireo. Ny areti-mifindra dia nahatonga ny faritra sasany hiditra ao anaty fifantohana maranitra, maranitra ny zorony boribory, manitatra ireo chasme, ary miaraka amin'izay koa, mampifandray ireo banga sasany. Ny mpanasa toa ny dokotera, ny mpamonjy voina, sy ireo